Ezilahlwayo imaski yokhuselo, KN95 imaski yokhuselo, iiglavu zilahlwe - Sinnovation
Isingxobo se-Bopp sisebenzisa i-polypropylene ephothiweyo yelaphu njengelaphu lomzimba linokwenza ukuba iphakheji yakho ikonwabele ukuhlala ixesha elide. Uyilo olwahlukileyo (i-backseam, isetyhula, iinotshi zesithupha, ukugqobhoza, ukuprinta okungahambisani ne-skid kunye ne-gussets njl. Njl.) Inokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.
Ngokweemilo, kukho ingxowa ejikelezayo ejikelezayo, isikwere sejumbo kunye nohlobo lwe-U ibhegi enkulu ene-loop yokunyusa phezulu, okanye icala lokuphakamisa icala okanye iluphu yokunyusa ezantsi. Ngokwesiqhelo ine-inout spout kunye ne-outout spout.
Iphepha le-poly bag1 Isekwe kwingxowa ye-pp, ekwabizwa ngokuba lilaphu ngokufutshane, ukudibanisa ifilimu kunye nephepha ngendlela ye-tape. Isetyenziswa ekupakisheni iintlobo ezahlukeneyo zemichiza, ezinje ngomgubo kunye nezinto eziyimbumba eluhlaza njengePOM, ABS, polystyrene, poly-formaldehyde, polyvinyl chloride, styrene butadiene irabha, iiplastikhi zobunjineli kunye noluhlu lwempuphu, izinto eziyimbumba njl.
PP ibhegi ephothiweyo, ekwabizwa ngokuba yingxowa yolusu yenyoka, enye yeeplastiki, isetyenziselwa ukupakisha. Izinto eziphambili - ezinepolypropylene (PP). Yenziwe nangona i-extrusion, yolulelwa kwintambo ye-tape, ukuluka kunye nokwenza ibhegi. Ukusetyenziswa: Isetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni iintlobo ze powdery kunye neempahla eziyimbudumbudu.
Ezilahlwayo imaski yokhuselo, isicoci sesandla
Umatshini wemaski, imaski yokukhusela i-KN95
Shining star plastic Co, Ltd.yinto yamashishini aphesheya kwimveliso kunye nokuthengiswa kweemveliso zeplastiki kunye neemveliso zokupakisha iphepha, zigubungela indawo yeehektare ezili-100, isebe laseVietnam ligubungela indawo yeehektare ezingama-50, isityalo saseCambodia sigubungela ummandla weehektare ezingama-50. Ngomatshini wokuzoba ohamba phambili, umjikelo osisazinge, umatshini wokuprinta umbala, umatshini wokulaminetha, umatshini wokwenza ibhegi, umatshini wokushicilela, umatshini wokubetha ifilimu, imveliso yegranulator njl njl umgca, amandla obuchwephesha ukufikelela kwinqanaba lehlabathi eliphambili. Inkampani inamakhulu eqela lobuchwephesha, elinemveliso etyebileyo kunye namava olawulo. Inkampani ixhotyiswe ngezixhobo zovavanyo lobuchwephesha, iqela lovavanyo lobungcali kunye nemithetho engqongqo yokuhlola kunye nemigaqo, kwaye ngenkqubo yokuqinisekisa umgangatho wolawulo lwe-ISO kunye nokuqinisekiswa kweQS, umgangatho ufikelele kwelona nqanaba liphezulu kolu shishino. Oko kwamiselwa le nkampani, "isicwangciso sokuqala, impumelelo yeshishini, ulawulo olujolise kubuchule" beshishini, inyathelo nenyathelo lokuba ngamashishini afanayo e-China kubume beshishini, anefuthe elikhulu kumashishini oshishino.